प्रेसिजन प्लास्टिक मशीनिंग पार्ट्स र मशीनिंग सेवाहरू | PTJ शप
घर > सामग्री प्रकार > प्लास्टिक मेशिन
प्रेसिजन प्लास्टिक सीएनसी मिल र टुक्रिएको अंश
साना, ठूला र भारी कम्पोनेन्टहरूका लागि प्लास्टिकको गैर-मानक भागहरू निर्माण सेवाहरू।
PTJ शपको इन-हाउस टूलि facility सुविधाले तपाईंको सबै CNC प्लास्टिक मशीनिंग आवश्यकताहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
PTJ वचन भनेको आवश्यक मात्राको डेलिभरी हो, जब तपाईंलाई आवश्यक हुन्छ, कुनै असफल विना। यो प्रतिज्ञा प्लास्टिक-विशिष्ट ज्ञानको एक स्तर द्वारा समर्थित छ र औसत मेसिन पसलले स्वामित्व प्राप्त गर्दैन। हामी दुबै उच्च प्रदर्शन र मानक उपयोगिता प्लास्टिकको अनुपम सुविधाहरू बुझ्दछौं।
PTJ ईन्जिनियरहरू र मशीनिंग पेशेवरहरू प्लास्टिक धुलाई सफलताको लागि आदर्श स्पिन्डल गति र फिड दरहरू जान्दछन्। तिनीहरू अत्यधिक सटीक उपकरणहरू प्लास्टिकको मसिनिंग प्रोजेक्टले माग गर्ने मागहरू सिर्जना गर्न इन-हाउस टूलिing्ग विभागबाट सहायता प्राप्त गर्दछन्।
सीएनसी मेसिनको कस्टम निर्माता प्लास्टिक भागहरू HDPE बाट बनेको, PEEK, PTFE र पीवीसी। हामी आईएसओ 9001: २०१ Cer प्रमाणित छौं। आज उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्!
सम्पर्क हाम्रो अनुकूलन प्लास्टिक मेशिन भागहरू मशीनिस्टहरु आज तपाइँको जटिल भागहरूको विवरण छलफल गर्न।
PTJ शप सीएनसी मेशीन प्लास्टिकको अनुकूलन प्लास्टिक उत्पादक र घटक सहित अनुकूलन निर्माता हो. विभिन्न प्रकारको चिसो पंच गर्न योग्य प्लास्टिक सामग्रीहरूमा निर्मित। आपतकालिन / भीड सेवाहरू उपलब्ध छन्।
22 मा मा dia को साथ लम्बाई मा उपलब्ध २.2.3 / in in मा र +/- ०००००१ in in सहनशीलता। क्षमताहरूमा बोरिंग, ड्रिलिंग, डिबर्निंग, ग्राइन्डिंग, नउर्लि,, मिलिंग, पॉलिशिंग, पुन: नाउदै, मोडि,, ब्रोचिंग, होबिंग, स्लॉटि,, कटिंग, ट्यापिंग, रोलिंग र थ्रेड व्र्लिंग समावेश छ। थप सेवाहरूमा क्याड डिजाइन, सीएएम प्रोग्रामिंग र रिभर्स ईन्जिनियरि include समावेश छन्। अनुप्रयोगहरूमा जडानकर्ताहरू, फास्टनरहरू, फिटिंग्स, गियर्स, शाफ्टहरू र भल्भहरू समावेश छन्। एयरोस्पेस, उपकरण, मोटर वाहन, फार्म ड्युटी, HVAC, समुद्री, चिकित्सा, सैन्य, खनन र अन्य उद्योगहरु सेवा दिईयो। आपतकालिन र भीड सेवाहरू उपलब्ध छन्। AS अनुरूप JIT वितरण।
मेशीन गरिएको प्लास्टिक ईन्जिनियर गरिएको छ र कठोर अपरेटिंग वातावरणको सामना गर्न डिजाइन गरिएको छ, रसायन प्रतिरोध प्रस्ताव र घर्षण कम गर्ने विशेषताहरु।
सम्पर्क हाम्रो CNC मशीन शप आज तपाईको प्लास्टिकको भागको बारेमा छलफल गर्न।